Gịnị kpatara Luz de Maria de Bonilla? - Ngụda na Alaeze ahụ
Mgbe ọtụtụ afọ hapụrụ onwe ya nye uche Chineke, Luz de María malitere ịta ahụhụ ihe mgbu nke Cross, nke ọ na-eburu n’ahụ na mkpụrụ obi ya. Nke mbu mere, ya kerịta, na Fraịdee: “Onye nwe anyi jụrụ m ma m chọrọ isonye na ahụhụ Ya. Azara m ya na mgbe ahụ, mgbe otu ụbọchị nke ekpere na-aga n'ihu, n’abalị ụbọchị ahụ, Kristi pụtara n’ihu m n’elu obe kerịta ọnya ya. Ọ bụ ihe mgbu a na-enweghị ike ịkọwa, ọ bụ ezie na m maara na ọ nwere ike na-egbu mgbu, ọ bụghị ngụgụ nke ihe mgbu Christ na-ata ahụhụ maka mmadụ. ”
• Na Nlekọ nke ụka Katọlik, nke bishọp Juan Abelardo Mata Guevara nke Esteril nyere n'afọ 2017 na ederede Luz de Maria na 2009, yana nkwupụta nke onwe ya na-ekwupụta nkwenye ya na ikike ebumnuche ha.
Ozi si Luz de Maria de Bonilla
Luz - Asịrị agha…
...ugbu a kwụsị ịbụ asịrị.
Luz - Na-asọpụrụ ibe
Ị ghọwo mmadụ gbara ọchịchịrị nke na-eguzosi ike n'ihe n'etiti ha ...
Luz - Ọchịchị Kọmunist na -aga n'ihu
... na oke nnwere onwe, nyere site na mmadu n'onwe ya.
Luz – Gbaba n’ime igbe nke nzọpụta
... megide ike akụ na ụba nke zubere ịgbasa obi nkoropụ n'ụwa.
Luz - Ntugharị na-aga n'ihu
Ọ na-emetụta oge ọ bụla.
Luz – Bịakwute Nne a
Ị naghị ada naanị gị.
Luz - Tee ọnụ ụzọ gị mmanụ
... ma nyefee uche Chineke.
Luz - Ụwa ga-eji mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-asọ
... na ịhụnanya Atọ n'Ime Otu.
Luz – Oge mmezu nke nnukwu amụma
Ịdọ aka ná ntị ahụ ga-abụ omume ebere kasịnụ.
Luz - Dị ka ụlọ elu Bebel
Mmadụ nwere mgbagwoju anya, a na-eduga n'ịbụ ohu.
Luz - Bụrụ ndọtị nke uche Chineke
Nọgide na-amụbawanye ihe ime mmụọ.
Luz - Kpọọ m ehihie na abalị
Ụka na-aga n'ihu n'ichekwa oke.
Luz - Ụnwụ na-abịa
A na m akpọ gị oku ka ị na -ekpe ekpere Rosary dị nsọ na Chaplet.
Luz - Ọgba aghara sitere na Ego
Nwee obi umeala.
Luz - Ogwe aka Chineke enweghị ike ịla azụ
... mana Ọ ga -agbachitere ụmụ ya.
Luz - Igwe nke Kọmunist
Ọ biliela iweda mmadụ ala ma megbuo ya.
Luz de Maria - Ị ga -alụ ọgụ ka idobe okwukwe ahụ
Ị nweghị nri? Ụnwụ abịala? Gakwuru Chineke.
Nwa nke ịla n'iyi amalitela ọrụ.
Luz - Ị ga -alaghachi ibi ndụ ndụ
Ma ọ bụghị naanị gị.
Ọgbọ gị ga -emezu uche m.
Luz - Ị nweghị ike ịkwaga
Mkpagbu amalitela. . .
Luz - Oge Dị Oké Mkpa
Ihe ojoo ebiliwo megide mmadu.
Luz - ngwa ngwa nke inwe mmekorita nke Jisos
Oge ihe isi ike dị nso karịa ka ị chere.
Luz - Ndị Ntorobịa Adaala
Gbanwee n’ihe ị kwesịrị ịbụ.
Luz - Unitydị n'otu Na-egbochi Ihe Ọjọọ
United, ị ga-enwe mmeri.
Luz - Kpọsaa okwukwe gị na Chineke
Ọcha nke ụmụ mmadụ na-aga n'ihu.
Luz - Must ga na-ege ntị
Mmadu ole na echefu idi nso nke ndumodu ...
Luz - Dị Ka Atụrụ Na-enweghị Onye Ọzụzụ Atụrụ
Ajọ ihe na-achụ gị ọsọ ...
Luz - temometa nke ndụ ime
Ọrụ onwe gị na omume gị.
Luz - Ọ bụghị oge maka ntụrụndụ
... ma oge ntụgharị uche.
Luz - Ọ bụghị Ọgwụgwụ Worldwa
A na-eme ka ọgbọ a dị ọcha.
Luz - Oge Ikpebiri Ihe Maka Mmadu
Nwa ila-n'iyi na-eche ịpụta.
Luz - adọ aka ná ntị banyere ọgwụ mgbochi ọtụtụ afọ gara aga
Were ihe ọmụma zụọ onwe gị!
Luz - Akụkọ na-agbanwe
Ntughari ga-eme ugbu a!
Luz - ọgbọ nke dị ọcha
Ihe mgbochi gị kasịnụ: ikpu ìsì ime mmụọ.
Luz - Atụmatụ Atumatu thewa
Ọgba aghara na-abịa site n'ọrịa nke ahụ na mmụọ ...
Luz - Ọjọọ agbachiwo gị
... na-eme ka ị tụọ ụjọ ikwupụta na ị bụ Ihe Onwunwe Chineke!
... dị nso karịa ka ị chere.
Luz - Lelee Onwe Gị Eziokwu
Banye n'ime ime.
Luz - Ntughari bụ nke onwe
Luz - Mgbe akàrà nke anụ ọhịa bia
Onye ga-ekwesị ntụkwasị obi nye Ọkpara m?
Luz de Maria - Mmezu nke obi zuru oke
Ọcha obi dị ngwa.
Luz de Maria - Ọrịa Ọhụrụ Ga-abịa
Laghachi nkịtị abụghị eziokwu gị.
Luz de Maria - Ọchịchị Kọmunist na-aga n'ihu
Are na-agbaga n’egosi na-emegide Kraịst.
Luz de Maria - Anyanwụ Ga-agbanwe
E wuola Igbe.
Luz de Maria - Na Manipulating Uche
Teknụzụ ọhụrụ ndị na-emetụta uche ...
Luz de Maria - Are Dị Nso na Ihe Omume
Lenti a ga-ebi na nhicha.
Luz de Maria - Chọọchị Ga-ama jijiji
Atụla egwu, debe okwukwe gị.
Luz de Maria - M Ga-ebelata Oge
Daysbọchị ga-abịa ọsọ ọsọ; unu aghaghi idozi onwe-unu.
Luz de Maria - Kwadebe Yourlọ Gị
Abụ m onye na-agbachitere ezinụlọ.
Luz de Maria - nke sitere n'aka ike uwa
... na-akwadebe ụmụ mmadụ iji aka ha rịọ akara nke anụ ọhịa ahụ.
Luz de Maria - Owuwe Ihe Ubi Na-eru Nso
... abụghị Ikpe ikpeazụ nke mba dị iche iche, kama nke ọgbọ a.
Luz de Maria - Ime ime bụ Mpụ
You na-eche na mmezu nke amụma dị anya?
Luz de Maria - Debe oriọna gị
M na-akpọ gị ka ị bụrụ akụkụ nke Ihe fọdụrụnụ dị nsọ.
Luz de Maria - Humanmụ mmadụ ga-enwe ọdachi
Ọgbọ a ga-abịarute n’ihu ọnwụnwa nke okwukwe.
Luz de Maria - Oge nke Ihu Uzo
Jikere onwe unu maka ida nke aku na uba
Jisos Kraist rioro ka ewebata ihe anakpo Triduum zuru uwa na Disemba 12 nye Lady anyi nke Guadalupe
Jizọs Kraịst chọrọ nraranye zuru ụwa ọnụ na Disemba 12 ...
Luz - Kpọọ na Ngbanwe Ọsọ
More na nnukwu ịma jijiji ...
Luz de Maria - oke egwu
Nnukwu ịma jijiji nke Nne a gosipụtara na-abịa ...
Luz de Maria - Osimiri Nnupụisi
... na-eduga ndi mmadu na-emegide Kraịst.
Luz - Mba dị iche iche na-akwadebe Agha Thirdwa nke Atọ
Anọ m ebe a iji chebe gị, mana ị ga-ahapụ ihe ọjọọ.
Luz - Osimiri nke Mgbagha
Echerela ihe ịrịba ama — ha nọ n’etiti gị.
Luz - Mkpịsị Uhie
Ihe ojoo agbasawo n’etiti mmadu.
Luz de Maria - Mee Ndozi Taa
Luz de Maria - Echela
A na-ahọta Ihe fọdụrụ n’ime m.
Luz de Maria - M na-akwado gị
... maka ihe guzo n'ọnụ ụzọ ámá.
Luz de Maria - ifhapụ ọka wit
A na-anwale anyị.
Luz de Maria - Ọhụụ & Ntughari
Mmadu, ekwela ka obi sie gi ike!
Luz de Maria -Isacha ocha mmadu di osooso
Jikere nụ! Ihe ga - eme ga - adịrị mmadụ mfe ma ọ bụrụ na ọ nọrọ n’ime Chineke ...
Ihe Mere Anyị Na-apụghị Iji Were “Mgbawa.”
Luz de Maria na microchip ...
Luz de Maria - Ihe okike n'onwe ya na-emetụta mmadụ
Ya mere na nwoke ahụ ga-alaghachikwute Chineke ma mata ya.
Luz de Maria - Ndụ agaghị adị otu ọzọ
Atụla egwu: ndị otu Legions nke Celestial na-eche
Luz de Maria - itymụ mmadụ na-enweta n'amaghị Ihe Signrịba Ama
Lovehụnanya Atọ n'Ime Otu na-edozi ihe omume ọhụrụ
Luz de Maria - Oge bụ "Ugbu a"!
Kwadebe maka Nnukwu jijiji.
Luz de Maria - Were Ọrụ maka Mmehie Gị
You ga-ahụ onwe ụnụ dịka ọ dị.
Luz de Maria - Atụla egwu, ọ bụ ezie na ihe ọjọọ na-eche
Agaghị m agwa gị maka njedebe nke ụwa, kama idowe nke ọgbọ a.
Luz de Maria - Bụrụ .hụnanya
Ezi ịhụnanya nke Ọkpara m kwesịrị ịnabata nke ezi ụmụ m.
Luz de Maria - Ọchịchị Kọmunist
Kingchọ ọgba aghara zuru ụwa ọnụ n'oge ụnwụ nri.
Luz de Maria - Ekwensu abanyela Chọọchị
Ga - ahụ n’onwe gị n’oge amụma: mmezu nke mkpughe.
Luz de Maria - Nọgide na Mkpesa Ime Mmụọ
Ọrịa, ọrịa na-efe efe na ọrịa na-efe efe, bụ nke na-abụghị nanị na-emetụta ahụ, kamakwa mmụọ, agaghị akwụsị.
Luz de Maria - Are Na-ebi N'ime Ọgụgụ
... gaa zute gị na ihe m buru n’amụma maka mmadụ.
Luz de Maria - Dragọn ahụ na - emegharị
Ọ dị mkpa ka a nabata mama m dịka nne nke mmadụ, Co-redemptrix na Mediatrix nke graces niile.
Luz de Maria - Jesus Agaghị Ahapụ Gị
Ndị ya dị ka atụrụ na-enweghị onye na-azụ ha.
Luz de Maria - Nje Virus bụ Nanị Prelude
Ndị nke Chineke chọtara onwe ha na Getsemane.
Luz de Maria - Atụrụ n'etiti Wolves
Onye-nwe-ayi rue na June 13, 2020: Ndị M hụrụ n'anya: Gaa n'ihu n'okporo ụzọ ntụgharị. Nọgide n'ịhụnanya m, ...
Luz de Maria - Eluigwe na Ala
Nọgidesie ike, ejila okwu Eluigwe dị mfe.
Luz de Maria - Ọnwụnwa agaghị egbu oge
Nọgide na-ekwesị ntụkwasị obi karịa ihe ndị ọzọ.
Luz de Maria - Nzaghachi
Ndi "ndi ikike ahu ike kari Chineke"?
Luz de Maria - Obi Humanmụ Mmadụ Na-ekpu
Agha ahụ na-eduga na agha ụwa.
Luz de Maria - Chọpụta Ihe ịrịba ama nke Oge!
Guzogide "ebumnuche nke echiche" ...
Luz de Maria - Wardọ aka na ntị ahụ
Kpee ekpere, dika omume nke Eberem di nso na ndi mmadu…
Luz de Maria - Nọrọ n’udo n’obi m
Safenọgide na-eche nche apụtaghị ịnwere nnwere onwe nke ihe gaje ịbịa, kama iche ya ihu n'udo.
Luz de Maria - Nchịkwa Site na Egwu
Emegoro atụmatụ nke Masonic iji wee juputa ndi mmadu site na egwu.
Luz de Maria - Nke a bụ Oge na-adịghị oge
Nke a bụ oge na-abụghị oge…
Si na Roman Ritual nweta ngozi nke Nnu na Mmopu
Mmezu ajuju nke ngozi.
Iguzogide Viruses na Ọrịa…
Iji ihe ndi Chineke kere mee ka anyi nwekwuo nsogbu.
Mkpụrụ vaịn a gọziri agọzi maka Times nke ụnwụ
"A na-eji mkpụrụ ha eme ihe oriri, akwụkwọ ha na-agwọkwa." (Ezikiel 47:12)
Luz de Maria de Bonilla - Kpee ekpere megide Nje Virus
Nwaanyị anyị ruo, Machị 15, 2020: Bemụ m hụrụ n'anya nke Obi M na - enweghị atụ: a gọziri m gị n'oge a mgbe ndi mmadu ...
Luz de Maria de Bonilla - Volcanoes Sachaa
St Michael Onye isi ala nye: Childrenmụaka, oke ọkụ ga-eju ndị mmadụ anya n’ihu oke ọkụ nke ọkụ na-amabeghị. Mmadu ga adikwa ozo ...
← Gịnị kpatara Valeria Copponi?
Gịnị kpatara Simona na Angela? →